नेपाली माछालाई बजार अभाव «
झापा-खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट मरेका माछा नेपाल भित्र्ने र बिक्री हुने हुँदा नेपालका माछा पालक कृषक मारमा परेका छन् । बजारमा मरेका भारतीय माछा न्यून मूल्यमा पाइने हुँदा नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कृषकको गुनासो छ ।
“उपभोक्ताले गुणस्तर भन्दा पनि मूल्यमा बढी महत्व दिन्छन्” झापा अर्जुनधाराका माछा पालक कृषक युवराज पाण्डेले भने, “भारतीय माछा सस्तो मूल्यमा पाइने हुँदा हामीले उत्पादन गरेको माछा बजार अभावमा छ ।” पूर्वी नाका काँकडभिट्टा, भद्रपुरको मेची नदी साथै अन्य नाकाबाट समेत आइसमा राखेर भारतबाट मरेका माछा नेपाल भित्रिन्छ । “भारतको मरेको माछा प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ, हामीले उत्पादन गरेको कार्प जातको माछा ५ सय र पंघास जातको ३ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पर्छ जसकारण हामी मूल्य घटाएर पनि बिक्री गर्न बाध्य छौँ ।” साथै व्यापारीले बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले भारतबाट माछा आयात गर्ने हुँदा माछा पालक कृषक मर्कामा परेका हुन् ।
झापाको अर्जुनधारा–३ मा चाँदनी बहुउद्देश्य कृषि फार्म र गौरादह नगरपालिकामा हेमचन्द्र बहुउद्देश्य कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याएका पाण्डेले वार्षिक २ लाख किलो माछा उत्पादन गर्दै आएका छन् । ८ विगाहमा माछा पालन गर्दै आएका पाण्डेले उत्पादित माछाको खपत नहुँदा माछा पालक कृषक बिस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताए । “भारतीय माछाले बजार अभाव मात्र सिर्जना गराएको छैन स्वास्थ्यमा समेत असर पु-याइरहेको छ” पाण्डेले भने, “विषादी हालेको माछाले कम मूल्यकै कारण बजार पाउँछ, हामीले उत्पादन गरेको अर्गानिक माछाको माग नै छैन ।”
काँकडभिट्टामा रहेको पशु क्वारेन्टाइन चेक पोस्टका प्रविधिकले पनि सामान्य प्रकृया पूरा गरी भारतबाट आयतित माछा छाडिदिँदा विषादी भएको माछा सहजै नेपाली बजारमा आइपुग्ने गरेको पाण्डे बताउँछन् । “सरकारले माछा पालनमा प्रोत्साहन गर्नका लागि अनुदान कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक भए पनि भारतीय माछा आयातमा कडाइ गर्न नसक्नु दुःखद पाटो हो ।” पाण्डेले भने ।
विषादी हालेको माछा बिक्रीमा रोक
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र विषादी प्रयोग गरिएका माछा बिक्रीमा रोक लगाएको छ । गत असोज १५ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले बिर्तामोडलाई विषादीमुक्त नगर बनाउने अभियान अन्तर्गत यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मत्स्य व्यवसायी संघको तर्फबाट १५ जना माछा कृषकले मरेका तथा विषादी प्रयोग गरेका माछा बिक्री बन्द गर्न नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । भारतबाट आयातित फर्मालिन प्रयोग गरिएका माछाको बिक्री भइरहेकोले व्यवसायीले त्यसमा रोक लगाउन नगरलाई अनुरोध गरेको व्यवसायी हरिप्रसाद मैनालीले बताए । नगरपालिका र आसपासमा रहेका अर्गानिक माछा कृषकलाई बजारीकरणमा असर पारेको साथै मानव स्वास्थयका लागिसमेत हानिकारक रहेको हुँदा भारतबाट आउने मरेका र सडेका माछा बिक्री बन्द हुनुपर्ने मैनाली बताउँछन् ।
नाकामा माछा भित्राउँदा कडाइ नहुनु, खुल्ला नाका हुनु र नेपाली उपभोक्ता सचेत नहुँदा खुलेआम रुपमा विषादी प्रयोग गरिएका माछा नेपाल भित्रने गरेको छ । “उपभोत्ता सस्तो मूल्य नै खोज्छन्, कहिले, कहाँबाट ल्याएको ? कहिले मारेको भन्ने तर्फ कसैको ध्यान दिँदैनन्” बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुर्वकुमार शिवाकोटी भन्छन्, “नगरबासीलाई विषादी खुवाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा नगरपालिका सकारात्मक छ” हामी माछा मासु र तरकारीमा प्रयोग हुँदै आएको विषादीको अनुगमन गर्नेछौँ ।”
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र झापाका मत्स्य विकास अधिकृत प्रदीपकुमार श्रेष्ठ बजारमा अखाध्य माछासमेत बिक्री हुने हुँदा उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । झापाका स्थानीय तहले मत्स्य पालक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै अर्गानिक माछा उत्पादन बढाउन र विषादी हालेको माछा बिक्रीमा रोक लगाउनसके नेपाली माछाले बजार र मूल्य दुवै पाउने उनको भनाइ छ ।
बढे माछा पालक कृषक
स्वदेशी माछाले बजार अभाव झेल्दै आए पनि सरकारले मूलुकलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । साथै माछा पालन व्यवासायलाई अनुदानसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो सँगै झापामा व्यवसायिक माछा पालन गर्ने किसान बढेका छन् । तुलनात्मक रुपमा थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएपछि यहाँका किसान व्यावसायिक माछा पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०६७-०७७ मा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र झापामा ९० वटा माछा पालन फार्म दर्ता भएको मत्स्य विकास अधिकृत श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष इलाममा १२ वटा फार्म दर्ता भएको जनाए । झापामा मात्र वार्षिक ११ सय ३७ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । जिल्ला भर १ सय २५ वटा माछा सहकारी फार्म रहेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
तीन पालिकामा मत्स्य ब्लक, भुरा भने भारतबाट आयात
जिल्लामा माछाको भुरा उपलब्ध नहुँदा भारतबाट भुरा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । अधिकांश किसानले भारतबाट माछाको भुरा ल्याउने गरेको मत्स्य अधिकृत श्रेष्ठले बताए । “भद्रपुरमा ह्याचरी खुल्न लागेको छ” श्रेष्ठले भने, “त्यसबाट किसानलाई सहयोग पुग्छ । झापामा कार्प जातका रहँु, नैनी, भाकुर, कमनकार्प, सिल्भरकार्प, बिगहेड, ग्रासकार्पसँगै पंघास, तिलापिया जातका माछा पाल्ने गरिएको छ । झापामा ३ सय ७ हेक्टर जलाशय क्षेत्रमा माछापालन गरिएको छ ।
भारतबाट माछा आयात हुँदा क्वारेन्टाइन ऐनअनुसार मात्र आयात गर्न मिल्ने प्रावधान छ । अहिले व्यवसायीले सम्बन्धित मुलुकबाट स्वस्थताको प्रमाणपत्रसहित माछा आयात गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्वस्थताको प्रमाणपत्रसहित माछा आयात गर्नुपर्छ । विगतलाई हेर्ने हो भने सिमावर्ती जिल्ला झापामा ८० प्रतिशत माछा भारतबाट आउने ग-थ्यो । उक्त मात्रा अहिले आधामा झरेको छ । अझै करिब ५० प्रतिशत माछा भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा २ हजार ७९ मेट्रिक टन आयात भएको माछा २०७६-०७७ मा आइपुग्दा ५ सय ३६ मेट्रिक टनमा झरेको एनिमल क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकडभिट्टाका डा. सुलेस्वर मण्डलले बताए । २०७० सालदेखि आयात क्रमशः घट्दो दरमा रहेको मण्डल बताउँछन् । ६ वर्षयता माछा आयातमा ६० प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांकले देखाउँछ । मण्डल भने परीक्षणको क्रममा माछामा विषादी प्रयोग गरिएको पाइए भारत नै फर्काउने गरेको बताउँछन् । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै आयात हुने भारतीय माछा झापासँगै पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र संखुवासभासम्म पुग्ने गरेको छ ।
माछा भारत निर्यात
झापाको बिर्तामोडका माछा व्यापारी नथुनी साह नेपाली माछा भारतीय बजारमासम्म पु¥याउँछन् । साहले गत पुस, माघ र फागुनमा गरेर २० क्वीन्टल माछा भारत निर्यात गरे । साहले सर्लाहीका कृषकले उत्पादन गरेको माछा भारत निर्यात गरेका हुन् ।
कोरोना महामारीसँगै लकडाउन सुरु भएपछि भने माछा निर्यात नगरेको उनी बताउँछन् । उनले नेपाली माछा सिलगुडी र नक्सलवाडीमा बिक्री गर्दै आएका छन् । भारतमा ठूला माछाले मात्र बजार पाउने हुँदा निर्यात बढाउन नसकेको उनी बताउँछन् । नेपालमा भन्दा भारतमा माछाले बढी मूल्य पाउने हुँदा माछा भारत निर्यात गर्दा फाइदा हुने साहले बताए । “नेपाली बजारमा ५ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने माछा भारतीय बजारमा ५ सय भारुमा बिक्री हुन्छ” साह भन्छन् ।